Hohadihadin’ny Bianco ny « Raharaha Villa Elizabeth » | NewsMada
Hohadihadin’ny Bianco ny « Raharaha Villa Elizabeth »
Ho tonga hatraiza indray ? « Hohadihadina ny nanao ny fifampivarotana io « Villa Elizabeth » io ary hiantso ny Bianco izahay hanohizana ny dingan’ny fanadihadiana efa eo an-tanan’izy ireo, hijerena ny tena tompon’andraikitra nivarotra ny tanim-panjakana », hoy ny minisitra isany, Ramanatsoa Benjamina sy Andriambololona Vonintsalama, afakomaly. Nambaran’izy ireo fa nofoanana ny fivarotana ary averina amin’ny fanjakana ny “Villa Elizabeth”.
Anisan’ny manaitra amin’ity raharaha ity ny tsy nahalalan’ireto minisitra roa ireto izany raha tsy notairin’ny filoham-pirenena sy nanatona azy ireo ilay orinasa nividy, Madaterrain. Tsy mahagaga raha lasan’olon-kafa ny tanim-panjakana na tranom-panjakana eto amintsika. Tanàna lehibe sy trano be tahaka ny eny Ivandry aza tsy fantatr’izy ireo, mainka fa ny any an-toeran-kafa rehetra any ? Iandrasana fanairana sy fampahafantarana hatrany ?
Etsy andaniny, inoana fa tena hanao ny asany ny Bianco amin’ny fanadihadiana, saingy ny mampanahy ho very an-javony tahaka ireo raharaha hafa rehefa entin’ity rafitra eny Ambohibao ity eny amin’ny fitsarana izany. Olobe rahateo ny tompon’antoka tamin’ny fivarotana ny “Villa Elizabeth”.